मेस्सीले रियल म्याड्रिडलाई तर्साउन सक्दैन, हामीसंग संसारकै सर्बोकृस्ट खेलाडी छ !! भिनिसियस - Experience Best News from Nepal
लोस ब्लान्कोस युवा खेलाडी भिनिसियसले आफ्नो टिम क्लासिकोको दोस्रो लेगका निमित तयार रहेको र कुनै डर नरहेको भन्दै बार्सिलोना माथि खर्बरदारी गरेका छन्। उनले यससंगै टक्कर दिदै लिओनेल मेस्सीले रियल मद्रिडलाइ तर्साउन नसक्ने समेत दाबी गरेका छन्। एक पछि अर्को हुदै गरेको क्लासिकोका निमित आफ्नो टिम तयार रहेको दाबी समेत गरेका छन्। उक्त खबर आज अग्रेजी खेल पत्रिका गोलमा सार्वजनिक गरिएको छ।
बुधबार राती (नेपाली समय)मा हुने उक्त कोपा डेल रे अन्तर्गत दोस्रो लेग रियल मद्रिड विरुद्ध बार्सिलोना हुदै छ। पहिलो लेग १-१को ड्र भएको थियो।
टाइटल रेसमा १२ अंकको अन्तर बनाएको रियल बाकी आउदै गरेका चुनौतीका निम्ति तयार रहेको भिनिसियस बताउछन। मिडियामा बोल्दै भिनिसियसले भने-“हामी क्लासिकोका निमित तयार छौ !!” साथै रियलसंग २ हप्ताको समय रहेको र फ्यानहरु उनीहरुको समर्थनमा रहेकोमा ढुक्क रहेको समेत बताउछन। भिनिसियस भन्छन:”म खेलका निमित निकै हतोउत्साहित छु र यो खेल निकै महत्वपूर्ण छ भने हरेक खेलाडीको रहर क्लासिको खेल्ने हुन्छ र म छु”!
एक खेल ला लिगामा खेल्न बाकी रहेको रियलले ३ अंक कुनै चुनौती नरहेको समेत बताएको छ। मद्रिडकअ निम्ति हाल भिनिसियस निकै महत्वपूर्ण खेलाडी र खम्बाको रुपमा रहेका छन् भने अन्य सिजन हेरी यस सिजन मद्रिडलाइ चुनौती भने निकै बनेको देखिन्छ।
१८ बर्षकाइ उमेरमा भिनिसियसले २५ खेल खेल्दै ४ गोल दर्ता गरेका थिए। उनको वार्सा विरुद्धको भूमिकालाई निकै उच्च मानिएको छ भने उनले दिएको चुनौती एक ५ पटक बालोन दिओर जितेका स्पेन लिग हिरो मेस्सी खेलमा बाधा बन्न सक्छन।
मेस्सी उत्कृस्ट खेलाडी हुने भिनिसियस बताउछन् तर मेस्सीको डर भने नरहेको बताउछन्।
मेसीको जादुमय प्रदर्शनप्रति लिभरपूलका प्रशिक्षकले गरे मेस्सीको प्रशंसा !!
BarcelonaLionel MessiReal MadridVinicius Junior